အချမ်းသာဆုံး ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးများ – MyStyle Myanmar
ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဟာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ထိ အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတွေထဲက အချမ်းသာဆုံး မင်းသမီးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
၁၀။ Kareena Kapoor Khan
မင်းသား Saif Kha နဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ Karenn Kapoor ဟာ မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ လည်းစိမ်းမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ သူမရဲ့ ချမ်းသာမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သန်းရှိပါတယ်။
၉။ Priyanka Chopra
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်က Miss World ဆုကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးလေး Priyanka Chopra ကိုလည်း မြန်မာပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသားပါနော်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ အနုပညာအလုပ်စပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတကာထိ ထိုးဖောက်ပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့ သူမရဲ့ ချမ်းသာမှုက ဒေါ်လာ ၈ သန်းရှိပါတယ်။
၈။ Anushka Sharma
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာမွေားဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလှပဆုံးဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက ဒေါ်လာ ၈ သန်းရှိပါတယ်။
၇။ Kangana Ranaut
နာမည်ကျော် ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရှိပါတယ်။
၆။ Sonakshi Sinha
၁၉၈၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး နာမည်ကျော် မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရှိပါတယ်။
၅။ Katrina Kaif
သူမကိုလည်း မြန်မာပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသားဟုတ်? ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဇူလှိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့ ဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာကြေး မြင့်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Dhoom 3, Boom ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ သူမကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းပါ။
၄။ Deepika Padukone
ဒီမင်းသမီးလေးကိုလည်း မြန်မာပရိသတ်တွေစိမ်းမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၃၀ ကျော်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီဖြစ်ပြီး သူမကို ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရှိပါတယ်။
၃။ Bipasha Basu
မော်ဒယ်ကနေ မင်းသမီးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကိုတော့ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Doom 2, Race ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းရှိပါတယ်။
၂။ Vidya Balan
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာအလုပ်ကိုစပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော့ ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းရှိပါတယ်။
၁။ Sonam Kapur
၁၉၈၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံး မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့သူမဟာ မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားသူ တစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းရှိပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတွေထဲက ဘယ်သူ့ကို အချစ်ဆုံးလဲ။
MyStyle Myanmar2020-09-18T17:44:47+06:30September 18th, 2020|Lifestyle, Stars & Style, အထွေထွေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|